Lapana haingana 4 sosona Rigid-flex PCB China Manufacturer
Description:4 Fitaovana fanamboarana malefaka fanamainty,4 Layer-Board Board,Birao malemy-maika
Home > Products > PCB matevina > Lapana haingana 4 sosona Rigid-flex PCB
Lapana haingana 4 sosona Rigid-flex PCB
Drafitra circuit pirinty vita pirinty mafy fo (PCB) dia famolavolana board misy boribory izay mampiditra ireo singa amin'ny hardboard sy ireo boribory mora ampiasaina. Ny PCB marefo matevina dia matevina amin'ny teboka sasany eo amin'ny solaitrabe ary milentika amin'ny hafa. Noho izany antony izany, ny mivezivezy mafy dia henjana na mifindra tsy tapaka mandritra ny fitazonana ny endriky ny faritra mila fanohanana fanampiny. Matetika no miendrika kapila miendrika takelaka ary ahitson-tsofina miorina amin'ny tabilao matevina. Arotsaka ao anaty anatiny ny haavo matevina ary miditra ao anaty fizarana matevina ao amin'ny PCB.
Famaranana vita: HASL leadfree, fandatsahana ENIG, chem tin, flash volamena, OSP, rantsan-bolamena, peelable, fandatsahana volafotsy, ENEPIG
Tsy maintsy ho izy izany no zava-dehibe voalohany.Ny nametraka ny kalitao ho toy ny indostrian'ny indostrian'ny PCB voalohany, manana fitaovana 99% mahery ao an-trano isika. Famonosana, fametahana, fisisihana, AOI (Auto-optical inspection), fitsapana, sns .Izany no mahatonga antsika hiantoka ny kalitao.
. Na inona na inona ilainao FR4 mahazatra, TG ambony, board aluminium, board RF miaraka amin'ny Er, PTFE, board brass.large mavesatra, birao avo lenta miaraka amin'ny vias.impedence control boards.Ka afaka manolotra vokatra toy izany haingana tahaka ny ananantsika fitaovana maro samy hafa ao anaty tahiry.
Mpanjifa marobe (indrindra ho an'ny mpamorona sasany) no tsy tsara amin'ny fizotran'ny famokarana, na dia tsy afaka mamorona rakitra gerber marina aza izy ireo amin'ny haino aman-jery EDA.Fa manana traikefa lehibe amin'ny indostrian'ny PCB izy, ireto misy torohevitra vitsivitsy ho anao.7 * 24 fanohanana an-tserasera, afa-tsy ny sinoa antsika Taona vaovao.
7.Maly valiny, fandefasana haingana
4 Fitaovana fanamboarana malefaka fanamainty 4 Layer-Board Board Birao malemy-maika Fitaovana fanamboaran-tena 4 Fampitaovana ENEPIG Famaranana Dingana fanamboarana PCB 2 Fitaovana fahita fanatanjahan-tena matevina Ny fanatsarana ny fanatsarana